“JIRO MAIZINA” Bokan-trosa 707 miliara Ar ny Jirama
Nampahafantarina omaly ny horonan-tsary novokarin’ny Tambazotra Malina mitondra ny lohateny hoe: “Jiro Maizina”, izay niarahany tamin’ny Tranparency International-Initiative Madagascar, Friedrich Ebert Stiftung,…
Fanadihadiana lalina na « investigation » mikasika ny angovo io, indrindra fa ny orinasa Jirama. Ho an’i Madagasikara, mahatratra 7800MW eo ny herijikantsika hamokatra herinaratra, kanefa 2% monja amin’io no voatrandraka, 17% amin’ny Malagasy no mba misitraka herinaratra. Ho an’ny JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy) manokana, mena ny tondro! Naneho ny Minisitry ny angovo Atoa Andry Ramaroson ao anatin’io horonan-tsary io fa bokan-trosa ny Jirama, raha mbola manohy varotra faty antoka, dia tsy ho tafavoaka izany, ka mila manova ny “business model”. 707 miliara Ar ny trosa, raha ny tatitra ofisialy ny 2020 ka isan’ny olana ny fifanarahana. Tamin’ny faran’io taona io ihany koa no nisy ny fanamelohan’ny PAC (Pôle Anti-Corrumption) ny Tale Jeneralin’ny Jirama teo aloha Atoa Désiré Rasidy sy ny Tale Jeneraly Lefitra Atoa Albert Marie Ravelojaona noho ny fanomezana vahana mpamatsy angovo tsy miankina,… Miankin-doha amin’ny tsy miankina, 30 any ny fifarahana fivarotana angovo amin’ny Jirama. Ahiana ny kolikoly toy ny: fanomezana tsenan’asa amin’ny famatsiana solika, isan-jato alaina amin’ny faktiora, ny “commissions”,… Toy izany ihany koa ny mety fidiran’ny politika satria tamin’ny 2018 ohatra, dia nisy orinasa amin’ny angovo namatsy kandida ho filoha. Misy ny fifanarahana tena mambotry toy ny hoe: 40MW no nifanarahana, rehefa miasa ny milina, zara raha mamokatra 15 hatramin’ny 20MW, kanefa ny 40MW ihany no hikajiana ny vola. Ny fifanarahana tamin’ny ENELEC (Energie Electrique) izay ao anatin’ny Vondrona Filatex, ohatra, dia nofaritana 32MW ny famokarana, kanefa zara raha namokatra 19MW ny ENELEC, kanefa mbola vidina 32MW ihany no aloha aminy, ka nahatratra 23 712 000Ar isan’andro no alohan’ny Jirama mba hividianana 32 000KWH amin’ny ENELEC,.... Ny an’ny Fanjakana sy ny Vondrona Axian izay misy ny orinasa Jovena mpamatsy solika tonga hatrany amin’ny fanapahana famatsiana noho ny trosa, saingy nanenjana tamin’ny “requisition” ka 18000 m3 no notakiana, izay filàn’Antananarivo ao anatin’ny iray volana. 150 tapitrisa dolara be izao isan-taona manome 80% amin’ny tetibolan’ny orinasa manontolo no atokan’ny Jirama isan-taona ho amin’ny solika hanodinana ireo “centrales thermiques”. Ahiana ihany koa ketrika avo lenta mety hanalefahana ny fidirana amin’ny “transition énérgétique”,…
Tafiditra ao anatin’ny horonan-tsarin’ny Tambajotra Malina ilay antontan-kevitra niparitaka ny 3 novambra teo, misy sora-bola 1,031 miliara Ar voalaza fa nifampizaran’ny mpitantana ny Jirama, saingy rehefa nanantona sy naka fanazavana tamin’ity orinasa ity izy ireo, dia mbola tsy nahazo valiny hatreto.
Legende: Nandritra ny fampahafantarana ny horonan-tsary “Jiro Maizina” novokarin’ny Tambazotra Malina omaly
Aferan-tsolika Ho vitavita ho azy ilay 64 000 litatra nanjavona ?
Tsy hita intsony izay marina sy diso mikasika ilay raharaha fahaverezan-tsolika 64 000 litatra teo anivon’ny Jirama. Andaniny,
Raharaha Ninie Donia “Andrasana rahampitso ny didim-pitsarana”
Mandrava sy maka ny tanin’ny vahoaka madinika ao Nosy be Hell ville ny karana sy vahiny ary mpanam-bola,
Fahaverezana volamena 36 kg Manjavozavo ny resaky ny praiminisitra
Efa tany amin’ny 6 taona lasa no nametrahana io “coffre” io, tany amin’ny taona 2016 tany ho any no efa very ireo volamena 36,433 kg ary tsy fantatra mazava hoe:
Volamena asisika anaty fitombenana Sri Lankais iray indray no tratra teny Ivato
Nahatrarana trafikana volamena indray teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato omaly 28 jona 2022 hariva. Teratany Sri lankais iray,